ကျိုင်းလပ်မြို့၌ ကြက်မောက်သီးအရောင်းအဝယ် အေး၍ တောင်သူများ အခက်တွေ့. - Kanbawza Tai News
Home ကျိုင်းလပ် ရှမ်းရှေ့သတင်းများ ကျိုင်းလပ်မြို့၌ ကြက်မောက်သီးအရောင်းအဝယ် အေး၍ တောင်သူများ အခက်တွေ့.
ကျိုင်းလပ်မြို့၌ ကြက်မောက်သီးအရောင်းအဝယ် အေး၍ တောင်သူများ အခက်တွေ့.
August 18, 2021 ကျိုင်းလပ်, ရှမ်းရှေ့သတင်းများ,
တာချီလိတ်ခရိုင်၊ ကျိုင်းလပ်မြို့တွင် တောင်ယာခြံများနှင့် နေအိမ်ခြံဝန်းများအတွင်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စိုက်ပျိုးသည့် ကြက်မောက်ပင်များမှာ ယခင်နှစ်ထက် အသီး ပိုသီးသော်လည်း COVID-19 ကြောင့် အရောင်းအဝယ် အဆင်မပြေ ဖြစ်ကာ တောင်သူများ အခက်တွေ့ နေရကြောင်း သိရသည်။
“ အရင်နှစ်တွေက အနီးနား ရွာတွေမှာ လိုက်ရောင်းလို့ရတော့ အဆင်ပြေတယ်။ ဒီနှစ်မှာ အသီးက ပိုသီးပေမယ့် ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ ရွာတွေကလည်း အဝင်မခံတော့ ရောင်း မကောင်းဘူး။” ဟု ကြက်မောက်ခြံ လုပ်ကိုင်နေသူ အိုက်ပီးက ပြောသည်။
ကျိုင်းလပ်မြို့ပေါ်ရှိ တောင်သူများ အနေဖြင့် ကြက်မောက်သီးကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် အဖြစ်တောင်ယာခြံများ၊ နေအိမ်ခြံဝန်းများတွင် စိုက်ပျိုးထားကြပြီး တစ်ကီလိုလျှင် ဘတ် ၂၀ (ကျပ် တစ်ထောင်) ဖြင့် ရောင်းချကြောင်း သိရသည်။
ကျိုင်းလပ်မြို့တွင် ကြက်မောက်သီးအပြင် သရက်သီး၊ နှင်းသီး စသည့် သီးနှံပင်များကိုလည်း မိသားစု အပိုဝင်ငွေ ရရှိရေးအတွက် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စိုက်ပျိုးကြခြင်း ဖြစ်ပြီး COVID-19 ကာလ အတွင်း အရောင်းအဝယ် အေး‌‌ကာ အခက်တွေ့နေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။